#Guddoomiyaha Golaha Wakiilada Puntland oo si kulul u dhaliilay qaar ka mid ah Musharaxiinta Madaxweynaha | Get Latest News From Horn of Africa
#Guddoomiyaha Golaha Wakiilada Puntland oo si kulul u dhaliilay qaar ka mid ah Musharaxiinta Madaxweynaha
Gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo oo ka hadlayay kulankii maanta ay xildhibaanada golaha wakiilada baarlamaanka Puntland ku dhageysanayeen khudbadaha musharixiinta Puntland ayaa dhaleecayn kala dul dhacay qaar kamid ah musharixiinta xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka Puntland.
Gudoomiyaha ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay musharixiin uu sheegay in ay tixgelin waayeen dhageysiga khudbadaha musharixiinta kale xili uu sheegay in ay ka dareereen hoolka Baarlamaanka.
“Halay dhagaysto Ana waxba dhagaysan maayo, Masuuliyada dalka ugu sareeyana waan doonaya suurta gal maaha” ayuu yidhi Gudoomiye Dhoobo oo lahadlahay Musharrixiinta.
Sidoo kale gudoomiyaha golaha wakiilada Baarlamaanka Puntland ayaa qaar kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada ku eedeeyay in ay ka baxeen hoolka Baarlamaanka iniii ay socotay khudbad jeedinta musharaxiinta xilka madaxweynaha iyo ku xigeenka Puntland.
Waxa uu sheegay in lagama maarmaan ay tahay in la ilaaliyo shuruucda iyo baratakoolka dowladnimo hadii la raadinayo masuuliyadd hogaamineed.
“Sidee baad ku kala xukumaysaan haddaydaan dhagaysan hadal jeedin barnaamij siyaasadeed kooda, Bulshadu way arkaysaa waxa dhacaya, waxaan u mahadcelinayaa xillibaanada 30 ka ah ee fadhiyo, iyo musharrixiinta 2-da ah” ayuu yiri gudoomiye Dhoobo.